Semalt - Nzira Yokuziva Nayo Uye Kurwisa Mweya Spam Kushandisa Google
Spam inowanikwa apo data isina kukumbirwa inogamuchirwa. Iyi mhando ye spam iri mumapoka maviri. Crawler spam uye Ghost spam. Kubvisa Mweya spam motokari kwakachenjera, asi iwe unoda kuziva kuti ndeipi rudzi rwemarware aripo, kutanga uye mberi - παιδικό αντηλιακό frezyderm προσφορες.
Vanokwezva vari rudzi rwe spam iyo inoshanyira nzvimbo yako nekutumira bots inonyatsoteerera mitemo yakafanana neyiyo mu robots.txt. Pavanenge vachibva panzvimbo yacho, nzira yekushanyira zvakakodzera muDogle Analytics data yakasara shure, asi nhamo, inhema. Zvinonyanya kuoma kuziva nokuti vanovanza shure kwekutumira kune mamwe mawebhusayithi echokwadi uye ne URL yakafanana.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji ( Semalt , anopa ruzivo rwake pamusoro pokurwisana neMweya spam kubudirira.
Ghosts ndiyo inowanzosvibisa spam. Kusiyana nemakumbo, havakwanisi kuonana newebsite yako, pane kudaro, iyo honye muGoogle analytics server kuburikidza neTritain pass through your Google Analytics tracking codes. Vanonyora kuburikidza nehutori dzenyu nekudziwana kubva kune mumwe wevatatu kana kuti zvinyorwa zvinokonzerwa nekutevera magwaro (UA-XXXXXX-Y). Sezvo vasingakwanisi kuwana nzvimbo yako yepaiti, vanoshandisa Measurement Protocol kuti ichinje data yako yeGoogle Analytics.
Vanhu vazhinji vanowanzobvunza kuti nei uchifanira kubvisa mweya spam. Spam ine zvinokanganisa zvinokonzerwa ne analytics yewebsite dzewebsite. Vanonyadzisa internet yevashandi nokukurumidza kuwedzera mutoro we server. Kunyange zvazvo vasingagoni kupindira zvakananga neSearch Engine Optimization, data inoshandiswa haitauri maitiro chaiwo emutauro wekutsvaga. Pakupedzisira, Your Search Engine Optimization ichasvibiswa mune izvo tsvakurudzo dzako dzekutsvaga dzichawa nekuda kwekuita zvisarudzo zvisina kunaka uye kutonga kusinganzwisisi.
Pasinei neizvi, zvinokuvadza pamatricriki anokosha sekutengesa, masangano uye kutendeuka mazinga ayo data inoshandiswa kunopera kumagumo emiromo, haazotsamwisi Search Engine Research Page (SERP). Zvimwe chete, kunyange Google Analytics inoratidzirwa basa rekuongorora, kwete nzvimbo dzose dzinoshandisa Google Analytics. Izvi zvinotsanangura nei chero data kubva kuGoogle analytics isingabatsiri mazita kubva panzvimbo yeGoogle.
Pane nzira dzokubata nayo mweya spam uchishandisa Google Analytics. Nzira idzi dzinosanganisira matanho anoshandisa imwe firiji inopesana nemweya spam..Inonyanya kukurudzirwa nokuti mushandisi anongogadzirisa uye anowedzera code itsva yekutevera. Kana zvisina kudaro, kugadziriswa kuduku kubva kumushandi kunodiwa. Pakupedzisira, kuratidza kushungurudza hostnames aids mukuchengetedza mweya spam kubva pane kupinda muGoogle Analytics data.
Kutanga , enda kuGoogle Analytics (kwaunofunga webhusaiti yepaiti ) uye ona tereti yekuburitsa. Muchikamu chekuruboshwe, tsvaka 'Vateereri' uye chengeta pairi. Dhura nepamuchina wekurudyi uye uone 'Technology' uye chengeta pairi. Wedzera pane teknolojia uye sarudza 'Network'. A Network Network Report ichaonekwa uye pamusoro payo, chengetedza 'Hostname'. Mushure meizvi, mazita ehostnames achaonekwa kusanganisira aya anoshandiswa ne spam. Iwe unogona kutora mazita ekutumira mazita. Somuenzaniso, thymaindomain.com kana seosydney.com.
Chechipiri , inosanganisira mazita ose evanhu uye ega maitiro anogara aripo. Somuenzaniso, seosydney \_ .com | thymaindomain.com.
Chechitatu , tanga tsika yekuita. Dzvanya pa 'Admin' tabu kuruboshwe rworuboshwe pane zvezasi (vimbisa kuti une maonero asina mafiritsi). Dzvanya pa 'All Filters' uye wovhara '+ Add Filter'. Pasi pe "Filter type" chengetedza 'Custom'. Izvi zvinoumba tsika itsva yemafuta. Ita Zita reFirita. Sarudza kuisa 'Hostname' mushure mekutarisa 'Shandisa' bubble. Tora maonero ako nguva dzose mubhokisi 'Filter Pattern'.
Pakupedzisira , enda kuApply Filters uye sarudza 'Master' uyezve "Wedzera" kune yakasarudzwa maonero. Sarudza 'Chengeta' uye shandisa mhinduro dzako.
Izvo zvakadaro, zvinonzwisisika kuti nguva dzose paunowedzera kodeji yekutsvaga kune chero basa, zvakanakisa kuwedzera iyi code pamagumo etuputa. Izvi zvinobatsira mukubvisa chero kupi zvako kunoitika mune ramangwana rehosthost spam.